पिँढीमै बसेर पेट चिर्थे चिन्यामान :: NepalPlus
हामी सानो छँदा अर्थात आजभन्दा पचास वर्ष अघि बा आमालाई पिराउँदा वा झगडा गर्दा बा आमा भन्नु हुन्थ्यो ‘सुईहाल्ने मान्छे बोलाइदिउँ ? अलि धेरै हराम भए धोक्रामा मान्छे हालेर लाने गठेलाई बोलाइदिउँ ? घर बाहिर यता उता हिंड्न खोजे, ‘गठे आउँछ, धोक्रामा हालेर लान्छ जानुहुन्न’भन्थे । गठे भनेका चाहिँ खोकनादेखि तेल बोकेर घर घरमा तोरीसँग साट्न आउने मानिस ।
उनीहरुको पहिरन घुँडाभन्दा तलसम्म आउने लामो सेतो दौरा र सेतै धोति बेरेका हुन्थे । कपाल जुरो बानेको हुन्थ्यो भने कसैको बाटेको । आमा बा ले भनेको त्यही सुई हाल्ने मानिस चांहिँ मैले देखेको पहिलो डाक्टर त्यही कालिमाटीका चिन्यामान हुन् । उनको त्यतिवेलाको सुई सिरिन्ज देखेर हाम्रो सातो पुत्लो जान्थ्यो । सिलावरका भाँडामा उनका सिरिन्ज पाक्थे ।
उनको घर कालिमाटीमा थियो । चार कक्षाबाट पढ्न शुरु गरेको जनप्रभात मावि कालिमाटी (अहिले सीता पेट्रेलपम्प भएको ठाउँ) भन्दा अलि उत्तर, जीवनदाईको पसल भन्दा अलि यता मुल सडककै लाइनमा थियो । गाउँ गाउँमा आएर घरघरमा विरामीको सेवा गर्ने डाक्टर उनै चिन्यामान थिए । त्यतिवेला उनलाई चिन्यामान कम्पाउन्डर भनेर सवैले चिन्दथे । रात विहान जुनसुकै वेलामा पनि केटाकेटा विरामी हुन् वा वुढावुढी वा महिला विरामी हुन् उनैको उपस्थिति हुन्थ्यो । सहरमा छाउनी, ताहाचल, कालिमाटी, टंकेश्वर मात्र हैन दक्षिण पश्चिम भेगका गाउँ तीनथाना, नैकाप, पुरानो नैकाप स्यूचाटार सीतापाइला आदि ठाउँमा साइकल चढेरै पछिसम्म पनि आउँथे । मसिनो स्वरमा बोल्ने सेतो गहुंगोरो, अग्लै थिए चिन्यामान ।
मलाई याद भए सम्म उनी सधैँ दौरा सुरुवाल र कोट लगाउँथे । उनको साइकलको पछाडि क्यारिएरमा छालाको व्याग हुन्थ्यो । त्यही व्यागमा औषधीका ट्यावलेट, स्टेथिस्कोप, सुइ, कपास, डिग्री आदि हुन्थे । घरमा विरामी परेपछि उनलाई लिन कालिमाटी जानुपथ्र्यो । त्यतिवेला फोनको कुनै सुविधा थिएन । सार्वजनिक यातायात पनि थिएन । घरमा बोलाउन जाने मानिस नहुनेले जागिर खान काठमाडौं सहर जानेलाई भनि पठाउँथे । उतिवेला हिंडेरै जान पर्ने भएकोले चिन्यामान कम्पाउन्डरकोमा विरामीको ठाउँ ठेगाना बताइदिएर जान्थे जागिरे । खवर भएपछि चिन्यामान विरामीकोमा आइपुगि हाल्थे । कतै गएका भए अलि समय लगाएर आइहाल्थे । उनका अनुभव र विरामीप्रतिको सद्भाव हेरचाहले धेरैको अकालमा ज्यानजानबाट वचाएका थिए । उपचार गराउँदा पैसा तत्काल भएन भने पनि पछि कालिमाटीमा आएर दिन्छु भन्दा मान्थे वा उनीसंग राम्रो हिमचिम भएकाले ‘म जिम्मा भएँ, म ल्याइदिन्छु’ भनिदिए हुन्थ्यो ।
मेरा बालाई आउँ, मासी, छुरै रगत दिसामा आइ हलचल गर्न नसक्ने सिकिस्त हुनु भएका मानिसलाई पनि उनैले वचाएका हुन् । मेरो घरसंगैको दिदीको पेटको ठूलो घाउ उनैले पिंढिमै वसेर चिरेका थिए । पित्तलको कोपरामा पिल्लिएको रगत र पिप थापेर फालेका थिए । पांच हातको पहेंलो गज कोचेका थिए । बिहान वेलुकै आएर घाउ सफा गरिदिन्थे ।
त्यतिवेला झाडा पखाला, आउँ रगत जे परे पनि उनीनै आएर हेर्थे । कालिमाटीमा उनको क्लिनिक थियो । क्लिनिकमा विरामी पनि हेर्थे । कतिले रोग वताएरै औषधी लिएर जान्थे । घरमा ल्याउन लिन जाँदा विरामीको लक्षण बताइदिनुपथ्र्यो । विरामीकोमा जाँदा उनले आफनो झोलामा त्यही अनुसारका औषधी राखेर ल्याउँथे । केही औषधी पुगेन वा छुट्यो भने उनकै कालिमाटीको पसलमा लिन जानु पथ्र्यो । अन्यत्र कहिं कालिमाटी यता औषधी पसल थिएन । अझ नियमित हेर्नु पर्ने सुइ लगाउनु पर्ने विरामीकहाँ त विहान वेलुका उनै टुप्लुक्क आइपुग्थे । उनले घरघरमा गएर विरामी हेर्ने र आफैले उपचार गर्न नसक्ने भएमात्र वीर अस्पतालमा पठाउने गर्थे ।
औषधी पनि मिश्रण विधिको हुन्थ्यो । विभिन्न चक्कीहरु पिसेर धुलो पारेर विरामीलाई खुवाउन दिन्थे । तत्कालिन अवस्थामा प्रयोगशाला परीक्षणजस्ता विधि थिएनन् । उनीहरुले जस्तोसुकै जटिल रोगीहरुलाई पनि आफनो अनुभव र ज्ञानका आधारमा काम गर्थे । त्यसबेला महामारीको रुपमा रहेका रोग झाडा पखाला, आउँ, रगत, टाइफाइड, हैजा, क्षयरोग जस्ता रोग अहिले सामान्य भएका छन् । तर नयाँ नयाँ रोगको प्रकोप भने बढ्दै छ ।
चिन्यामान पछि कीर्तिपुरका इसिलाल (इश्वरलाल) कम्पाउन्डर पनि घर घरमा आएर विरामी जाँच्ने, औषधी दिने, सुइ लाउने, घाउ खटिरा चिरफार गर्ने आदि काम गर्थे । कीर्तिपुर पांगा, नगाउँ मच्छेगाउँ र दक्षिण पश्चिम भेगका गाउँ गाउँमा इसिलाल पनि पुग्थे । धेरै अस्पताल खुलि सक्दा पनि इसिलालको घरमै धेरै मानिसहरु जचाउन जान्थे । कीर्तिपुरका व्रम्हचा कम्पाउन्डरले भने आफनै घरमा जाच्ने र औषधी दिने घर घरमा आउने गर्दैनथे । हात खुटृा मर्के भाँचिए कीर्तिपुरकै जोगलाल नाउ घर घरमा आइ लेप लगाउने गर्थे । उनी खेलाडीहरुको उपचार पनि गर्थे । मैले चिन्यामान, इसिलाल र व्रम्हचा, जोगलाल सबैसँग डाक्टर मानेर विरामी हुँदा समय समयमा जचाएको छु । उनीहरुका औषधीले धेरै रोगहरु निको भएको थियो । अहिले यातायातको साधन र सुगमता हुँदा पनि यसरी विरामीका घर घरमा पुगेर जाच्ने कम्पान्डर भेटिँदैनन्, छैनन् ।
हामी केटाकेटी हुँदा अस्पतालको नाउँ सुनेको पुरानो वीर अस्पताल मात्र हो । अलि साह्रो विरामी पर्दा त्यहीँ जचाउन लग्नुहुन्थ्यो । पछि गोराहरुले शान्तभवनमा चलाएको र शान्तभवन अस्पतालमा पनि आमाले पिठ्यूँमा बोकेर बहिनीहरुसम्मलाई जचाउन लग्नुहुन्थ्यो । पछि त्यही शान्तभवनको अस्पताल पाटन अस्पताल बन्यो ।
महाराजगंजमा टिचिङ अस्पताल खुल्यो । केटाकेटीका लागि कान्ति अस्पताल खुल्यो । प्रसुति सम्वन्धि प्रशुति अस्पताल थापाथलिमा खुल्यो । सरुवारोग सम्वन्धी अस्पताल टेकुमा खुल्यो । आँखा सम्वन्धि आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा खुल्यो । क्षयरोगका लागि क्षयरोग अस्पताल कालिमाटीमै खुल्यो । मानसिक रोगीका लागि मानसिक अस्पताल पाटनको लगनखेलमा खुल्यो । अचेल त अस्पताल कति हुन् कति । घरै पिच्छे अस्पताल भैसके । अस्पताल अनुसार विरामी पनि कति हो कति र रोगहरु पनि नयाँ नयाँ देखा परिरहेका छन् । डाक्टर पनि थुप्रै भैसके । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मारेको फड्कोका कारण मानिसको मृत्युदर पनि निकै कम हुँदै गएको छ ।
अचेल असी नव्वे वर्षका मानिस पनि ठमठम मजाले हिंडडुल मजाले गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को त मारेकै छ तथापी निजी क्षेत्रको पकडमा पुगेका अस्पतालहरु सेवामुखि भन्दा व्यापार मुखि भने बन्दै गएका छन् ।
(पुनश्च : मेरो अप्रकाशित चौथो पुस्तक भोगाइका कथाबाट) ।